Dhaliyaro olole nadaafeed ka sameeyay Pizza House | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dhaliyaro olole nadaafeed ka sameeyay Pizza House
Dhaliyaro olole nadaafeed ka sameeyay Pizza House
Olole nafaadadeed ayaa saaka dhalinyaro wiilal iyo gabdho isugu jira ka bilaabeen gudaha Maqaayada Pizza House oo sadex habeen ka hor Weerar ismiidaamin iyo mid toos ah ay ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab.
Maqaayada Pizza House ayaa aheyd goob ay inta badan dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho tagaan, iyadoo halkaas ay aheyd meel aad u qurxoon oo loo dalxiiso maalmaha farxadda sida ciidaha oo kale.
C/majiid Daahir Aadan oo kamid ah milkiiliyaasha Maqaayada Pizza House oo la hadlay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa ugu mahadceliyay dhalinyaradii u soo gurmatay kana qeyb qaatay nafaadadda.
“Waa ay mahadsanyihiin dhaliyarada walaalaheena ah oo gartay in ay na garab istaagaan waqtigan adag, waliba ayagaoo sooman oo cid ku amartayna aysan jirin, qaar macaamiisheena ayay ahaayeen iyo kuwo kale,” ayuu yiri C/majiid.
Previous articleTartamayaasha Degmada Kaaraan oo caawa u soo gudbay wareegga afar dhamaadka
Next articleDowladda Norway oo aqoonsatay baasaboorka Soomaaliga